कर दिवसमा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, बढी कर तिर्नेमा सूर्य नेपाल र सिद्धार्थ शमशेर राणा
सूर्य नेपालले तिर्यो वर्षकै सर्वाधिक आयकर
| 2018-11-17 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । करदातालाई प्रोत्साहित गर्दै सरकारले यस वर्ष पनि उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेको छ ।
यस वर्षका उत्कृष्ट करदाताहरुमा कम्पनी तर्फ सूर्य नेपाल प्रालि सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा सम्मानित बनेको छ भने व्यक्तिगत आयकर सबैभन्दा बढी तिर्ने करदाताका रुपमा सिद्धार्थ शमशेर जबरा सम्मानित बनेका छन् ।
सूर्य नेपाल कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो भने सिद्धार्थ शमशेर सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका छन् । शनिबार राजानीमा आयोजित छैठौं राष्ट्रिय करदिवस विशेष समारोह बीच अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले करदाताहरुलाई सम्मान गरेका थिए ।
उद्यमी सिद्धार्थ शमशेर योसम्म गरी पाँचौंपटक सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बन्न पुगेका छन् । त्यस्तै, सूर्य नेपाल प्रालिले यसअघि पनि दुई पटक बढी कर तिरेर सम्मानित बनिसकेको छ ।
करदिवस विशेष कार्यक्रमको आयोजना सरकारको आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको थियो । सरकारले विभिन्न १५ विधाका उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा मुलुकभरबाट कर तिर्ने कम्पनीहरु मध्येमा सबै भन्दा बढी आय कर तिरेकाहरु सममनित भएका हुन् ।
सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसीले उक्त सम्मान ग्रहण गरेका थिए । यस कम्पनीले गत आव २०७२/७३ मा पनि सबै भन्दा बढी आयकर तिरेर सम्मानित बनेको थियो ।
उसले आव ०७२ /७३ मा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क कर गरी ११ अरब २५ करोड ८९ लाख रुपिया कर बुझाएको विभागले जनाएको छ ।
व्यक्तिगत तर्फ राणा, अन्यमा को ?
विभागले क्षेत्रगत रुपमा सबै भन्दा बढी आय कर तिर्नेहरुलाई विधागत रुपमा सम्मान गरेको छ । व्यक्तिगत तर्फ सबै भन्दा बढी आयकर तिर्ने उद्योगी सिद्धार्थ शमशेर सहित अरुलाई पनि सम्मान गरेको हो ।
निर्यात उद्योग तर्फ सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने डाबर नेपाल, उद्योग तर्फ हिमाल पावर कम्पनी, कृषि तथा व्यापारमा प्रो बायोटेक प्रालि, सहकारी तथा लघुवित्तमा छिमेक लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ नबिल बैंक सम्मानित भएका छन् ।
नबिल बैंकका तर्फबाट सिइओ अनील केशरी शाहले सम्मान पत्र ग्रहण गरेका थिए ।
त्यस्तै, बिमा व्यवसाय तर्फ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा तर्फ नोबेल मेडिकल कलेज, सूचना प्रविधि तर्फ एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल, पर्यटन तर्फ तारागाँउ रिजेन्सी होटल, व्यापारमा सिप्रदी ट्रेडिङ सम्मानित भए ।
कारोबार रेन्जका आधारमा को को भए सम्मानित ?
सरकारले ४० करोड रुपियासम्म व्यवसाय गर्नेबाट सबैभन्दा बढी आय कर तिर्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडलाई सम्मान गरेको छ ।
त्यस्तै, ४० देखि ८० करोड रुपियासम्म कारोबार गर्नेमा नेपाल धितोपत्र बिनिमय बजार सम्मानित भएको छ ।
पछिल्लो १० वर्षभित्रको मूल्य अभिवृद्धिकर विवरण समायमा पेस गरी कर चुक्ता गर्ने कम्पनी मध्येबाट घोराही सिमेण्ट सम्मानित भएको छ ।
कसको तर्फबाट कसले गरे सम्मान ग्रहण ?
आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने सूर्य नेपाल प्रालिका तर्फबाट उपाध्यक्ष रवि केसीले सम्मान ग्रहण गरेका छन् ।
डाबर नेपालका तर्फबाट कम्पनीका वित्त नियन्त्रक आदित्य भार्गवले सम्मानपत्र ग्रहण गरे । डाबर नेपाल निर्यात उद्योगतर्फ सम्मानित भएको हो ।
उद्योगतर्फ हिमाल पावर कम्पनीले धेरै कर तिरेको छ । सम्मान पत्र कम्पनीका वित्त नियन्त्रक उमेश शर्माले ग्रहण गरेका छन् ।
यो वर्ष कृषि तथा व्यापार तर्फ प्रो बायोटेक प्रालि सम्मानित भएको छ । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक डा. दिशेन गौतमले सम्मान पत्र ग्रहण गरेका छन् ।
सहकारी तथा लघुवित्त अन्तर्गत छिमेक लघुवित्त सम्मानित भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोशीलाई सम्मान गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ सबैभन्दा बढी कर तिरेका नबिल बैंक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह सम्मानित भएका छन्।
त्यस्तै, सूचना प्रविधितर्फ एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल सम्मानित भयो । कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष विश्वास ढकाल सम्मानित बने ।
पर्यटन तथा होटेल व्यवसायमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल सम्मानित भएको छ भने तारागाउँका कार्यकारी निर्देशक सुरेशलाल श्रेष्ठले सम्मानपत्र ग्रहण गरे ।
व्यापार तर्फ सिप्रदी ट्रेडिङ सम्मानित बन्यो जसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले सम्मान पत्र ग्रहण गरेका थिए ।
शनिबार, १ मंसिर, ०७५